Solosaina Fandaharam - | Solosaina Teknolojia Global Lahatsoratra Vohikala.WS | GVMG - Global Viral Marketing Group
Solosaina Fandaharam -
Solosaina Teknolojia Global Lahatsoratra Vohikala.WS > Solosaina Fandaharam -
Adware Sy Ny Spyware Toy Izany Fanaintainana
Spywares sy adwares dia tsy hoe fotsiny an'izany fa matetika kokoa noho ny tsy mirona mba hanimba ny solosaina rindrambaiko ary indraindray dia afaka na dia hiteraka ny sasany fahavoazana ny hardware loatra. Ireo an'izany bugs no lasa bane ho an'ny aterineto browsers manerana izao tontolo izao. Izy ireo no lasa mahazatra occurrence fa isika indraindray dia mirona tsy miraharaha afa-tsy Andriamanitra mandràra ireo isika dia tokony tsy hanaiky ny. Spyware dia ny solosaina rindrambaiko fa mpitsikilo mikasika ny fampiasana ny aterineto. Izany no manangona ny tena manokana sy tsiambaratelo ny vaovao toy cr...
Solosaina Viruses Sy Guarding Manohitra Azy Ireo
Ity maoderina Vaovao Taonany, solosaina ireo filàna eo amin'ny fiainana. Raha isika hampiasa azy ireo ho tsotra functions toy ny fanoratana ny homework sy ny fandraharahana ny tatitra, miakatra ho zava-dehibe ny fihetsika tahaka an-tserasera ny fandraharahana ny fihaonana sy fifanakalozana, tsy misy afaka mandà fa ny solosaina no ampahany lehibe amin'ny fiainana andavanandro. Mampiasa solosaina, indrindra ny Aterineto, dia iray amin'ireo asa fa na dia ny iray amin'ny folo taona monja dia afaka manao ny fanisana mitoraka ity vanim-potoana. Miaraka amin'ny tsy mitsaha-mitombo ny fitomboan'ny lazan'ny sy reliance o...
Fomba Miverina Amin'ny Laoniny Ny Solosainao Ny Rakitra
Misy fomba maro mba miverina amin'ny laoniny ny rakitra ao amin'ny solosainao. Azonao atao ny mampiasa ny Aterineto ny rindran'asa sy ny tolotra izay hamela anao mba miverina amin'ny laoniny ny rakitra ao amin'ny iray hafa ny mpizara fa azo idirana amin'ny alalan'ny Aterineto. Azonao atao ihany koa ny mampiasa ny conventional azo anoratana CD-ROM kapila, izay azonao atao adikao, mametaka, ary mandoro ny rakitra momba ny solosaina amin'ny alalan'ny tsy misy-brainer asa. Zip disks ihany koa ny mahomby ho an'ny manohana hatramin'ny rakitra, toy izany koa ny ivelany mafy mihatra. Ahoana no Misafidy ny Data Ianao dia Tokony Hiverina...
Ramatoa Miditra Sy Ny Ms Excel – Inona No Atao Rehefa Sorting Tsy Miasa
Tany samy Microsoft Access sy Microsoft Excel tena mora ny manavaka fariana soratra na isa. Samy fandaharana ny famatsiana anay tamin'ny tsindrin'ny anjan'ny fitaovana izay mamela na ascending manavaka (1 ... 999) na descending manavaka (999 ... 1). Ny Ascending tsindry manana manga "Iray" ambonin'ny mena "[object Window]" amin'ny downward manondro ny tondro ny zo ny 2 taratasy. Ny Descending tsindry dia mena "[object Window]" ambony manga "Iray" amin'ny downward manondro ny tondro ny zo ny 2 taratasy. Fotsin ny kitondro anatin'ny c...
Mahafantatra Bebe Kokoa Mikasika Ny Adobe Photoshop
Ao 1987, ry rahalahy John sy Thomas Knoll nanomboka mivoatra solosaina fandaharam-pianarana fa mety hifantoka indrindra amin'ny imaging sy ny fakàna sary mampiasa ny solosaina. Kely dia ny rahalahy fantatro araka izany fotoana izany izy ireo dia mety tonga hampandroso ny iray amin'ireo solosaina izao tontolo izao indrindra nangataka taorian'ny software---ny Adobe Photoshop. Raha ny programa dia amboalohany mivoatra, ny Knolls nametraka orinasa antsoina hoe Adobe Systems. Ny tantaran'ny ny orinasa dia hoe mahaliana araka ny Photoshop ny tenany. Ianao...
Fiarovana Ny Solosaina Avy Amin'ny Adware Sy Ny Spyware
Tahaka ny solosaina mitohy mba hanjaka ao todays ny fiaraha-monina, maro dia maro ny olona tonga mba miankina amin'ny tolotra izany dia manome miasa, mifanerasera, ny fianarana, ary ny maha-raisina an-tanana avy amin'ny migalabona anaty fahafenoana-dry zareo ny trano. Saingy miaraka amin'ny teknolojia advancement matetika no tonga mpampiantrano ny olana. Raha reputable orinasa manana harnessed ny tanjaky ny solosaina mba hanomezana ara-dalàna ny tolotra, hafa disreputable vondrona hampiasa ny solosaina ny mahita ireo vaovao ireo niharam-boina sy ny pirinty ataonay pers...
Fitadiavana Mahagaga Adobe Photoshop Cs Tutorials
Ny Adobe Photoshop dia mahagaga tsotra izao. Raha ny adjective izay manoritra ny nomerika imaging fanovana software dia tena upbeat sy hahafinaritra, azonao an-tsaina ny fomba ianao dia afaka appropriately hitantarana ny farany karazany ny rindranasa amin'ny solosaina, hoe toy ny Adobe Photoshop CS. CS ao Adobe Photoshop CS mijoro ho 'Creative Suite', izay ny elo marika izay Nampiasa ny Rafi-Inc amin'izao fotoana izao dia mirary ny mba hamantarana ny vokatra Photoshop. Noho ny Adobe Photoshop CS dia tena maoderina ver...
Mankafy Ny Manamora Ny Famahana Ny Antso Voip Miantso Ny Iraisam-Pirenena
Raha toa ianao mitady mora sy mahomby ny fomba mijanona mifandray amin'ny vahoaka, dia na voip miantso ny iraisam-pirenena dia mety ho marina ny zavatra ianao mitady. Na voip iraisam-pirenena miantso ny rafitra no tsy mety miresaka na iza na iza, na aiza na aiza tsy misy ny maha-lehibe iray teo amin'ny sandriny sy ny tongony. Hatramin'ny afaka nividy an-tserasera, azonao atao ny manomboka nianoka ny tombontsoa na voip iraisam-pirenena miantso avy hatrany. Ny Tombony Fa tsy mbola momba ny fomba maro minitra ianao no namela na ny fomba lehibe ny ...
Rehetra Momba Ny Rindrambaiko Ho Injeniera Sy Ny Fampandrosoana
Ny rindrambaiko ho injeniera, fantatra amin'ny anarana hoe SE, dia ny fampandrosoana, [object Window], fikojakojana ary ny loharanon-kevitra momba ny rindrambaiko amin'ny fampiharana ny fomba fanao sy ny isan-karazany ny teknolojia avy any an-tsaha toy ny solosaina ny siansa, ho injeniera, rindranasa seha -, tetikasa fitantanana, nomerika ny tombony ny fitantanana sy ny mpanera design. Ny conception, ny fampandrosoana sy ny fanamarinana ny iray software rafitra no ho injeniera rindram-dia rehetra momba ny. Izany dia ilaina mba hamantarana, mamaritra, mahafantatra sy hanamarina ny resultant softwar...
Ny tsirairay fa manomboka mianatra famolavolavolana teny mila boky. Vanim-potoana. Tsy misy fomba manodidina azy. Azo antoka fa ianao no loads ny vaovao mikasika ny aterineto na dia tanteraka amin'ny antsipirihany sy amin'ny tutorials. Fa na inona na inona replaces tsara. Ny tena olana dia ny mitady boky tsara ao an-toerana boky store. Ianao dia nahazo taonina solosaina famolavolavolana boky. Ny sasany mendrika, ny sasany tena ratsy, ny sasany mora, ny sasany stupidly lafo.
Ao Ny Baikon'ny Taona Sophisticated Ny Fanivànana Ny Fiara Mpamono Ireo Ny Beacons
Izany wasnt lava loatra lasa izay isika no fiakanjoana ny taona vaovao. Maro amintsika no mbola mihevitra isika izany. Saingy ny vokatr'izany ny vaovao izao dia goavana fanamafisam-baovao momba izay nomena ny lohahevitra, ny vokatra na ny tolotra. Isika no nanery ny handany lehibe fifanarahana fotoana sifting amin'ny alalan'ny tranonkala, bits sy ny zavatra mba [enga anie] discover inona izahay mitady. Ho azy ny mozika, sarimihetsika, boky na vokatra hafa ny sariny fitoerana safidy no mahatonga izany dia sarotra kokoa ny mahita ny zavatra tianay; nefa ...
Ny dingana reselling tranonkala fampiantranoana ny tolotra dia lasa tena iraisana. Ity hiteraka fividianana tranonkala fampiantranoana abilities avy amin'ny tranonkala ny mpanome tolotra mpampiantrano, ary avy eo reselling ny tolotra ianao dia aza ampiasaina ny tenanao hafa ny fandraharahana. Izany dia fomba lehibe mba hahazo ny tranonkala fampiantranoana ny tolotra ianao dia mila, toy izany koa ny fomba hahatonga ny sasany vola fanampiny amin'ny asa. Ny reselling ny asa dia midika fa azonao ampiasaina ny hardware, [object Window], sy ny tambajotra harena ny vohikala mpanome tolotra mpampiantrano, nefa ianao tsy manana t...
Ny Fitazonana Ny Finday Varotra Ekipa Nikarakara
Nametraka ny finday varotra ekipa nikarakara araka ny tokony ho izy dia somary kely juggling; mila mitazona ny maso amin'ny baolina ity, maro amin'izy ireo, - pahataperana avokoa ny rehetra. Na dia izany aza, tsy tahaka lone juggler, androany ny mpandrindra sy ny varotra hery eo amin'ny sehatry ny, afaka hanarahana ny zava-mitranga amin'ny alalan'ny natokana solosaina fandaharana fa hanolotra synchronization angona avy amin'ny maro ny loharanom-baovao. Ireo fandaharana dia fantatra ho toy ny mpanjifa fifandraisana fitantanana ny fandaharana, na CRM. Ny iray amin'ireo mahomby indrindra mpanjifa relationsh...
Free Tahiry Software
Microsoft Windows ankehitriny ny sambo miaraka amin'ny teny tahiry free software izay azo idirana amin'ny fanindriana , , , ary .
Milalao Xbox Lalao Mac Osx Mampiasa Xbox Emulator Software
[object Window], mivoatra araka ny Microsoft, dia nisongadina ho toy ny iray amin'ireo malaza indrindra gaming konsoly hita ao an-tsena androany. Xbox hanatanteraka ny kalitaon'ny fialamboly fanomezany mivaingana sary sy miezinezina ny feo eo. Nefa, ahoana raha te-hilalao Xbox lalao nefa ianao tsy te-hividy Xbox noho ny antony ianao efa manana an-trano amin'ny solosaina toy ny Mac OSX milina sy ianao ireo ihany no liana amin'ny milalao antoka iraisana Xbox lalao. Izany, ny fomba ianao dia afaka mamaky ny maro Xbox...
Adwares dia ny sasany ny tena derided zavatra ao amin'ny aterineto miaraka viruses, spyware sy ny hafa mba ratsy softwares sy ny fandaharam-potoana. Na dia adwares no lazaina ho ny tena benign endrika spyware afaka raha ny marina aza ny fahasimbana sy eny, ianao dia afaka nandresy azy ireo.
Ny ankamaroan'ny mpampiasa Aterineto manaiky ny filàna ny fiarovana ny solosaina manohitra viruses, toy ny ankamaroan'ireo antsika alohaloha na taty aoriana lasa painfully mahafantatra ireny nasty kely fandaharana ireo rehefa hanakatona ny PC, spam antsika mailbox na hamafa ny rakitra.
Ahoana no Hiteraka Safidy Sarintany For Garmin GPS ny Sampana
Garmin dia iray amin'ireo ambony ireo marika ny GPS ny Sampana, izay no azo. Ny iray amin'ireo tsara indrindra dia manasongadina ny Garmin GPS ny Sampana dia ny zava-misy fa ny sampana dia manana ny fahafahana mandray sy ny download safidy vita maps. Ianao dia mila manokana solosaina fandaharam-pianarana mba hamorona ny sarintany for Garmin GPS ny Sampana. Ity rindran'asa ity dia antsoina hoe cGPSmapper. Azonao atao ny mividy cGPSmapper ao amin'ny tranonkalany: [object Window]://[object Window]. cGPSmapper dia azo vidiana ao amin'ny samy matihanina sy tsotra valaka. Ianao ...
[object Window] – Tsy Maintsy-manana Fiarovana Ho an'ny Solosaina
Miaraka amin'ny advent ny solosaina viruses karazan-javatra rehetra izany, antivirus ny fametrahana ny rindrambaiko amin'ny PCs dia lasa adidy. Ny antivirus software manome ny solosaina fandaharana izay hiezaka ny hanana amantarana viruses sy 'malware' (hafa mba ratsy software), thwart ny endeavors sy ny hanafoanana azy ireo niara. Momba ny Antivirus Software Ny antivirus software fandaharam-mety tonga voapetraka amin'ny solosainao na mety ho nividy ary voapetraka araka ny anao. Misy vitsivitsy ny 'mpanani-bohitra' manohitra ny whi...
Raha toa ianao manokana Iphone sy ianao raha tsy tia mianatra mametraka ny sarimihetsika momba izany, ianao izay tonga ho amin'ny ankavanana toerana. Raha toa ka ianao mamaky ity lahatsoratra ity, ianao angamba efa mahalala fa ny Iphone dia mahafinaritra singan-teknolojia-tsy hoe fotsiny tsy misy ny ankamaroan'izy ireo dia manasongadina ny hamotika ny fitaovana namely ny Ipod elanelana, nefa izy ihany koa no misy ny fahasahazan'ny androany ny fanapahana sisiny finday teknolojia.
Solosaina Viruses, Lanin'ny Kankana Sy Trojans Nanazava
Miady viruses sy ny fanendahana azy ireo dia lehibe ny fandraharahana amin'izao fotoana izao. Ny dingana voalohany dia ny fahalalana fotsiny fa ny zavatra fahavalo dia. NY FAHAVALO - Aloha sy Crackers ireo adalan'ny Solosaina ny milaza fa misy ny fahasamihafana eo amin'ny piraty sy crackers. Crackers ve ny fahavoazana ny rafi-dry zareo hanapaka ao am-mpisovoka fotsiny te-hahita ny fomba miasa ny zava-drehetra. Isika dia mampiasa ny mahazatra kokoa fe-potoana mpijirika. Saiky ny fe-potoana dia mpijirika olona nanao fanaka amin'ny fampiasana ny iray axe. Otrik'aretina dia "[object Window]" ...
Manam-Pahaizana Manokana Momba Ny Rafitra Atosiky Ny Fisalasalana
Ny Artificial sampam-Pitsikilovana vondrom-piarahamonina nangataka mba mazava ny maha-olombelona ny sampam-pitsikilovana araka ny trano solosaina fandaharana, izay naseho fitondran-tena marani-tsaina. Ny sampam-pitsikilovana no hita ho olana hamahana ny fahafahana. Ny ankamaroan'ny olombelona olana niseho manana reasoned, fa tsy noho ny mathematical, vahaolana. Ny diagnosis ny aretina dia mety tsy ho nikajy. Raha marary nanana ny vondrona symptoms, avy eo izy dia manokana ny aretina. Nefa, toy izany rudolph ilaina mialoha ny fahalalana. Ny fandaharam-ne...
Artificial Sampam-Pitsikilovana Sy Ny Intuition
Roger Penrose heverina ho toy izany sarotra ny. Ny fisainana dia tsy afaka na oviana na oviana te-haka tahaka solosaina asa. Izy niteny toy izany ao amin'ny boky, Ny Amperora ny Vaovao an-Tsaina. Nefa, boky vaovao, Ny Intuitive Algorithm, (TANY), nanolo-kevitra fa intuition dia ny firafitry ny fankatoavana ny asa. Intuition napetraka tamin'ny vaovao amin'ny alalan'ny maro neural faritra tahaka ny lightning streak. Ny angona nafindra avy amin'ny fidiran'ny amin'ny famoahana iray nitatitra 20 milisegaondra. Ny an-tsaina nahita, fantatra, lalaovin'ny ary nanao. Ny...
Vokatry ny data fahaverezana sy ny Antony tokony Offsite Akora ampiasaina
Ahalalana zavatra lahatsoratra maneho amin'ny antsipirihany ny fomba fanao tsara indrindra angona tahiry
PHP Fampandrosoana Dia Lasa Malaza hatrany Hatrany
PHP fotsiny dia mametraka ny Hypertext Preprocessor ary dia lasa tena malaza noho ny sakany natiora functions fa tsy azo ampiasaina ho an'ny. Koa, PHP fampandrosoana dia misy tsotra noho ny fahatongavan'ny andiany vaovao ny hianatra ny fototra. Koa, bebe kokoa avo lenta rindran ihany koa ny mampiasa PHP fampandrosoana satria tsy dia saika tsy misy fetra mba inona no azo atao raha ampiasaina araka ny tokony ho izy. PHP azo ampiasaina amin'ny ankamaroan'ny operating rafitra, izay mahatonga azy somary versatile. Raha ianao no mampiasa ny Microsoft Windows, [object Window], [object Window].
Ny fe-potoana rindrambaiko amin'ny ankapobeny ampiasaina amin'ny solosaina rindrambaiko fa dia tena ampahany ny solosaina rafitra. Izany fivarotana sy eny rehetra voafango vaovao na solosaina toromarika amin'ny PC. Solosaina rindrambaiko dia tena midadasika fivelarana amin'ny solosaina izao tontolo izao.
Ny Usefulness Ny Rakitra Shredder
Manana anao mandrakizay voafafa manan-danja sy tsiambaratelo ny rakitra avy amin'ny reny solosaina ary avy eo dia manahy taorian'ny fotoana vitsivitsy izay olona hafa mety raha ny marina ho afaka alaivo ireo rakitra? Ao ireo andro rehefa ny fiainany manokana sy ny confidentiality ao amin'ny fampiasana fitaovana maoderina sy ny haino aman-jery dia haunting olana, misy mila mampiasa solosaina ny fandaharana izay mety hahazoana antoka ny fiarovana ny fiainana manokana. Misy rakitra shredder fandaharam-malalaka ho an'ny olona izay tanjona ho an'ny traceless fanalana ny tena manokana sy tsiambaratelo solosaina f...
Araka ny ampahany misy ny trano birao na ny fandraharahana, iray fax milina dia tena fanaka fitaovana. Rehefa tonga ny composing iray fax, indraindray isika no mila manampy amin'ny famokarana tsara kalitao handrakotra ny namadika ny taratasy fitoriana na any amin'ny fahafantarana izay ho karazana manokana vaovao. Thats izay fax software tonga any. Ao amin'ny ezaka mba hahazoana ny faxing mila mora, software orinasa mpamokatra no namorona maro karazana fandaharan'asa ho an'ny fanaovana ny fax ny zava-drehetra avy amin'ny matihanina mba mahatsikaiky na somewhere eo.
Mpiandraikitra Tetikasa Izany: Petrakevitra Na Fomba Fanao?
Ny Teknolojia Vaovao, ary ny fampandrosoana ny fandraharahana solosaina ny rafi -, dia misy vaovao, izay aho midika izany fa latsaky ny 50 taona. Aho nanomboka ity ny fandraharahana ny taompolo 1960 ary dia tafiditra ao ny fanoloana punched karatra tabulator ny rafi-miaraka punched karatra solosaina ny rafi - (toy ny IBM 1400s). Araka ny teknolojia lehibe kokoa sophisticated (oh disks, lehibe fahatsiarovana sy ny compilers) noho izany, ny rafi-isika mivoatra dia nanjary zavatra sarotra kokoa. Ho AZY ny indostria nitombo, noho izany dia tsy ...
Solosaina – Ny Filàna Fiainana Maoderina
Ny solosaina tsotra midika izany fa misy ny milina izay azo compute. Aoka peek any amin'ny lasa sy hamantatra izay no ireo adalan'ny izay nieritreritra momba ny fananana periferika fa tsy manaova calculative asa araka ny recognizing inputs sy ny fanomezana mifanaraka aminy outputs.
[object Window]: Ny Maha-Zava-Dehibe Ny Tànany Amin'ny Fomba Fanao
CCNA kandidà maheno momba ny maha-zava-dehibe ny tànany amin'ny fomba fanao - saingy nahoana no tena zava-dehibe? [object Window], [object Window] #12933, milaza ianao!
Nahoana No Tsy Mahazo Ny Tenanao Amin'ny Solosaina Ny Fampianarana Androany?
Ireo izay hetahetan'ireo mba manana ny asako ao amin'ny solosaina ny indostria, na iza na iza izay desires hanana kokoa ny fahaizana lalina momba azy ireo manokana ampiasaina, mila mijery any ny zotra amin'ny solosaina ny fanabeazana. Nefa ianao dia mila mamantatra ny faritra ianao te-hifantoka amin'ny alohan'ny ianao soraty ny fray. Ny kojakoja antsoina hoe software no ao ambadiky ny fiara rehetra mahafinaritra ny zavatra hotanterahina araka ny solosaina, ary ny sasany ny solosaina ny fampianarana ny fampiofanana dia natao solely ho fampianarana ny olona ny fomba antsika...
Ny fe-potoana software dia transformed ny fiainan'ny olombelona ny maha-sehatra iray hafa. Rehetra ny asa no tena voadrokidrokin'i rindrambaiko sy mifandraika amin'ny rindranasa. Finday, miarahaba-ny haitao manara-maso sy mpilalao mozika dia ny sasany ny tena iraisana software nankany kasinga. Avy iraisana kasinga mba tena sophisticated miaramila equipments, rehetra mandeha amin'ny sasany ny rindrambaiko na ny hafa. Androany, ianao tsy afaka an-tsaina ny fiainana raha tsy misy software.
Inona No Otrik'aretina Ny Solosaina ?
Solosaina otrik'aretina dia mba ratsy solosaina rindranasa fa, rehefa novonoina iray unsuspecting olombelona, mampivoatra asa fa indrindra ataovy replicating ny tenany ary amin'ny tranga sasany nandefa iray payload. Folo taona na mihoatra lasa izay, viruses no tsotra. Izy ireo no ho ny rafitra sy ny tratrany rakitra iray na roa. Izany no fototra toy ny nanome baiko ny kafe rehefa kafe dia mora ny filaharana. "Iray kafe pleaseblack." Androany, ny catalog of viruses ianao no mba hiaro ny tenanao manohitra dia frighteningly manahirana. Aho...
Ny Teny Fampidirana Suduko Sy Suduko Lalao Vaovao Ny Vohikala
Sudoku no farany ankamantatra alohan'ny mahavery mba hiakatra ny firenena. Raha tianao ny fikarohana isan-karazany amin'ny alalan'ny bilaogy sy ny Sudoku lalao vaovao ny vohikala, ianareo dia hahita fa maro ireo olona no hilazana io voasokajy lalao araka ny vaovao Rubix Cube. Raha toa ianao ka nitombo tamin'ny taona 80 mety ho sarotra ny hanadino ny enim-sided sy enim-colored kianja, nefa Sudoku dia manao fotsiny izay.
Fantatrao Ve Ny Herin'ny Haino Aman-Jery Ny Famokarana Anareo?
Voalohany haino aman-jery, dia ny ankamaroany dia milaza software fandaharana izay mametraka nanoratra vaovao amin'ny alalan'ny sary sy feo hamorona tena appealing sy stimulating "ny famokarana" raha toa ianao ka dia. Ny hevitra famokarana haino aman-jery dia betsaka stimulating misy zavatra (aho.e. arakaraky ny hiverina ny fahaiza-misaina fa ianao no idiran'ny resaka) tsara kokoa ny hafatra dia nahazo manerana ny receiver ary dia "langilangy."
Inona dia tsy misy dikany ny fanovana ny isan'ny? Tsy misy dikany ny fanovana ny isa no ID ary CODE fariana izay irery hamantarana ny taha amin'ny fototry ny latabatra. Izy ireo no noforonin'ireo solosaina rindran -, ary nentim-paharazana famolavolavolana, izy ireo dia nanangana voalohany ny fidirana fikandrana aiza ianao no tompon'andraikitra mahatsiaro fa D midika hoe Dokotera, ary 402 dia ny tsara indrindra amin'ny mpanjifa. Hatramin'ny mety ho diso manavaka ny fidirana fikandrana satria fotsiny ny taratasy iray ary tsy ny isan'ny [faha-fitoviana] Marary ataovy m...
Solosaina Otrik'aretina Sy Ny Aterineto Lanin'ny Kankana Nanazava
Dia ny solosainao sluggish? Tsy nahasokatra ny fandaharana sy ianao mety tsy hahazo na inona na inona ho? Tsara, angamba ianao dia manana ny marary solosaina. Tahaka ny olona mahazo ny marary avy viruses, noho izany ve ny solosaina. Rehefa mitranga ity, mila manana solosaina technician jereo ny solosaina indray ny lamina sy ajanona ny otrik'aretina. Raha tianao ny hahafantatra zavatra momba ny solosaina, mety afaka ve ny tenanao io.
Software Famolavolavolana Sy Ny Solosaina Echec
Ny fiandohan'ny andian-taranaka codes ampiasaina rindranasa amin'ny solosaina, dia antsoina hoe ny milina teny na milina code, izany ihany no hany teny iray solosaina tena mahatakatra. Izany no fizotry ny 0s sy ny 1s fa ny solosaina no controllers electrically interpret araka ny toromarika. Ny faharoa taranaka codes dia antsoina ny antenimieram-teny. antenimieram-teny dia ny teny vahiny ao 0s sy ny 1s ho olombelona ny teny toy ny 'mampiditra'. Antenimieram-pirenena ny teny nadika foana dia miverina amin'ny milina code araka ny comp...
Unauthorized Ny Fidirana Voatahiry Amin'ny Solosaina Ireo Teny Fanalahidy Na Pin([object Window])
Miditra e-mails na solosaina rakitra iray spouse miaraka amin'ny fanampian'ny PIN([object Window]) na teny Fanalahidy hafa, kanefa tsy nahazoany alalana, ho fanitsakitsahana mivandravandra ny Wiretap Satan'ny. Na dia izany aza, izany dia fanitsakitsahana ihany raha ny laza dia ny fampitana sehatra tsy raha izany ny lahatsoratra-fampitana fitahirizana. Fanampin'izany, tahaka ny fidirana tsy ara-dalàna ny solosaina mifandraika amin'ny halatra tsy afaka ny hiantso hiharan'ny sazy henjana loatra, eo ambanin'ny aegis iray iraisana-tort lalàna ny fananiham-bohitra ny seclusion na fananiham-bohitra ...
Arovy Ny PC – Tsy Spyware Sy Adware
Avo Lenta Ny Endri-Tsoratra Mpaneho – A Lever Fa Strengthens Ny Creative Ezaka
Manasongadina Ny Solosaina RPG&#8217;s
Ahoana No Mandeha Ny Momba Ny Fitadiavana Solosaina Mora Vidy
Ahoana no aho Fidirana Ahy Linksys Router
Casual lalao – handray izany matotra
Electronic Kahie: Nahoana Businessness Mila Azy Ireo
Ny Fisafidiana Ny Zo Manara-Maso Ny – Iray Mpividy Guide
Hisafidianana Ny Zo Ny Mpanjifa Antsoy Ny Fitantanana Ny Software
Ny Fomba Bayesian Spam _sivana: Ny Asany
Tsy Hanadino Anao Ranomainty Cartridge!
Ivelany Mafy Ny Kapila Data Ezaka Fanarenana
[object Window]&Iray: Fahalalana Samihafa Karazana Batteries
[object Window] – Integrating Endrika Miaraka Amin'ny Teknolojia